Coronavirus, fikambanana iray izay manamafy orina sy mahazo ny maha-olona? : Martin Vrijland
Ny coronavirus dia toa mitondra fahamafisana lehibe eo amin'ny fiaraha-monina. Hitanao fa amin'ny fanafihana ny haino aman-jery sosialy amin'ny olona rehetra tsy sahy mitanisa hevitra hafa. Aza manao hadisoana akory. Nandritra ny 7 taona izay nanoratako, dia hitako fa ny isan'ny miaramila sivily izay mitifitra ny bala fitendry azy amin'ny olona ao amin'ny media sosialy dia lehibe noho ny isan'ny miaramila manao fanamiana. Ny lisitry ny namanao dia ao anaty lisitry ny namanao izy ireo ary manana hetsika mampihetsi-po izy ireo izay toa tsy mandoa vola be, fa afaka miakatra tsara ary mahazo fotoana be ao ambadiky ny fitendrena azy ireo. Misy vazivazy ve izy ireo avy amin'ny fanjakana? Ny fitazonana ny tombontsoa, ​​ny fampihenana ny sazy?
Rehefa namaky ny bokiko ianao dia nahita fa ny zava-misy marina rehefa hitanay fa misy heriny tokoa an'ity vahoaka marobe izay efa nandefitra ity ary efa efa naloaky ny fanjakana, izay tsy ho ela dia ho an'ny rehetra. ao amin'ny fanjakànana kaominista izay efa mihodina ankehitriny. Tamin'ny GDR teo aloha teo ambanin'ny Vondrona Sovietika, talohan'ny nianjeran'ny rindrina Berlin, 1 tamin'ny 50 dia olom-pirenena Inoffizielle Mitarbeiter (IMB). Tena nihevitra ve ianao fa ho nanjavona ao anaty boaty vovoka ity rafitra ity raha tena nahomby? Diniho tsara manodidina anao.
Samy nahatsikaritra ny vokadratsin'ny krizy coronavirus ny rehetra. Moa ve manana fanjakana an'arivony tapitrisa eo amin'ny fanjakana ve ny haka karama, manampy ny sahirana, ary ny fihenan'ny hetra? Ahoana no mety hitranga? Nandritra ny taona an-taonany dia nanosika ny fihenan-tena ary izao dia afaka manokatra tampoka tanteraka ny paompy! Hitantsika mangingina ny fampidirana vola miditra (toy ny kominista). Io fidiram-bola fototra izay mety ho nankafizin'ny Inoffizieller Mitarbeiter nandritra ny fotoana maharitra.
Izany fanampiana fanampiana avy amin'ny fanjakana tsy nampoizina izany dia mety ho avy amin'ny € 750 miliara an'arivony Nivoaka pirinty ny ECBt manana. Na izany aza, mbola misy siny hafa.
Taorian'ny ampahefatry ny taona 4, 2019 miliara Euros ao amin'ny renivohitry ny fisotroan-dronono no tonga nanatrika ny vola fisotroan-droa. Ny vola ho an'ny fisotroan-droa lehibe indrindra dia ahitana ny ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn), PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek), PBF BOUW (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid). Niaraka nanam-bola izy ireo 909 miliara renivohitra. Ny vola fanampiana amin'ny fisotroan-dronono ary mpampiasa vola hafa dia manome ny taham-barotra be indrindra amin'ny fifanakalozana stock stock Amsterdam.
Ireny vola fisotroan-dronono ireny dia tratran'ny fangalarana ny tsenam-bola mandritra izao krizy corona izao. Nohazavaiko tamin'ny an-tsipiriany fa mbola ho avy ihany io daroka io ity lahatsoratra ity.
Ireo fampahalalam-baovao ankehitriny dia mitatitra fa tsy misy intsony ny renivohitra any an-trano ahafahana mameno ny tombontsoa rehetra momba ny fisotroan-dronono izay nampanantenainy ny mpandray anjara ho azy sy ny ho avy. Ny taham-bolan'ny salanisan'ny famatsiam-bola dia nidina avy tamin'ny 29 isan-jato ka 101 isan-jato tao anatin'ny 95 andro (Sun. Trouw nitatitra efa tamin'ny 2 martsa). Midika izany fa 95 cents ny vola isaky ny pension euro voafaritra. Ny ECB izao dia nanolotra fonosana fanohanana QE (fihenam-bidy) nandritra ny taona maro. Betsaka ny orinasa nahavita nihazona ny vidin'ny tahony manokana, satria tena nahavita nindrana vola tany amin'ny zanabola saika tsy hita izy ary ny banky foibe dia nividy izany trosa izany. Raha mbola mividy ny anjaranao ianao dia tsy hiditra amin'ny tsena ny vola fa hitoetra eo amin'ny rindrin'ny mpampiasa vola institiota.
Ankehitriny, ny fanjakana holandey dia mitentina an'arivony tapitrisa ao amin'ny fiaraha-monina (izay azo inoana fa avy amin'ny ECB), ity farany dia lany eo amin'ny fiaraha-monina. Rehefa dinihina tokoa, omena ho fanohanana ny olona izay hividy sakafo sy zava-pisotro avy hatrany. Raha manonta olona an'arivony tapitrisa ianao amin'ny QE ary manohy mivezivezy any amin'ny sosona ivontoerana mpamatsy vola dia tsy misy fiantraikany amin'ny vidin'ny vola amin'ny tena fiainana izany. Na izany aza, raha manosika olona an'arivony tapitrisa ianao ary omeo ny olona dia mety hitarika hiperine ihany. Midika izany fa ny fanampiana izay nampanantenaina dia mety mbola ho fanamaivanana ho an'ny maro ary faly ny sasany mahatsapa ny fialantsasatra hipetraka ao an-trano, saingy tsy mahafinaritra intsony rehefa afaka 1 herinandro. Rehefa tonga ny fisondrotam-bidim-piainana dia lasa sarotra ny mameno kitapo misy menaka sy manome sakafo ny vava.
Tsy ho gaga ve aho raha nahita firenena iray ny vola fisotroan-dronono. Azo antoka fa raha ny fahitana fa ny volan'ny fisotroan-dronono dia ao amin'ny fatoran'ny governemanta (antoka amin'ny trosa) ary raha mahazo vola avy amin'ny ECB ny governemanta dia lasa tsy manankarena intsony izy ireo.
Mihevitra aho fa eo am-pihavinan'ny fiovàna tanteraka, miainga amin'ny heveriko fa demaokrasia ho an'ny mpitantana kominista teknolojia (rafitra mifehy nomerika). Fizarana afovoany indrindra. Izay rehetra fantatsika taloha dia hiova (ao anatin'izany ny fisotroan-dronono). Hanomezam-pirenena ny orinasa fa tsy mivantana, fa ny dingana sy ny tsirairay dia hahazo fidiram-bola fototra. Ny vola miditra dia azo antoka raha toa ka misy fanavaozana tanteraka ny rafi-bola manerantany ary azo lazaina ho miantefa amin'ity ihany koa. Tany Etazonia dia nahita an'i Donald Trump nanambara fepetra tahaka izany omaly izay natao tany Holandy. Famantarana izany eo amin'ny rindrina.
Raha te-hiantoka fidiram-bola fototra ianao raha tsy misy io vola io dia tsy misy vidiny noho ny fihenam-bidy, dia tokony hatsipinao tokoa ny tendrombohitra be trosa an-tsoratra. Ary raha omena fa ny vola fisotroan-dronono dia mitazona trosa lehibe amin'ny fanjakana holande dia tapitra ny vola sandoka ao amin'ireny vola ireny.
Ankehitriny tsy fantatro na hofoanana tokoa ny fanafoanana ny trosa rehetra, satria avy eo tsy maintsy miatrika ny rafitra ara-bola sy ara-bola manerana an'izao tontolo izao ianao. Na izany aza anefa, mino aho fa mandroso ny rafitra ara-bola vaovao manerantany.
Mora kokoa ny mamorona baiko vaovao hivoaka amin'ny korontana feno. Ary dia hihombo ny korontana. Mety ho hitanay aloha ny fanesorana ny vola fisotroan-dronono an'ny fanjakana holandey. Raha ny marina, ny fananganana ny vola fisotroan-dronono dia tsy mihoatra ny fividianana vola be pirinty ho an'ny paoma sy atody iray, fa ny isa ao amin'ny kitapom-bolanao dia toa zato arivo tapitrisa mahery fotsiny ary afaka manome betsaka kokoa ianao.
Mba hampiatoana tantara fohy: Mino aho fa ny hyperinflation no handroaka ny vahoaka holandey hiala amin'ny fanakatonana azy ireo. Mosary eto!
Mbola milalao ihany koa ny haino aman-jery sy mpanao politika izay mitifitra ny horonan-dry zareo amin'ireo olona nampandefitra (Inoffizieller Mitarbeiter, IMB'ers) izay noheverina fa tsy mitandrina ny halaviran-dalana 1.5 metatra mba hiteraka alibi izay efa nambarako roa herinandro: tafavoaka eo am-pelatanana ny coronavirus "satria efa mora loatra isika" ka tsy maintsy mandeha any fanidy mafy kokoa noho isika any Frantsa sy Espaina.
Izany famonoana mafy izany dia tsy azo ihodivirana am-bavany amin'ny masobe. Mandritra izany fotoana izany dia mety ho henontsika ihany koa izany coronavirus mutates ary lasa mampidi-doza kokoa izany rehetra izany. Noho izany dia ho hitanay amin'ny toe-javatra iray izay atahoran'ny olona ny mpiara-belona aminy ary raha mifanena aminy ianao, dia mety hahafaty anao izany. Araka izany, izay rehetra mandeha an-tsitrapo dia tonga mpamono olona maty "maty noho ny fanamelohana".
Alao sary an-tsaina ange ny toe-javatra misy izay tsy fahampiana any amin'ny foibe fitsinjarana ireo rojo fivarotana sasany. Alao sary an-tsaina fa tsy mahazo manome vola intsony ny ATM (noho ny loza ateraky ny otrikaretina azo fehezina) ary alaivo sary an-tsaina ny hyperinflation, izay ny fidiram-bolan'i Rutte nampanantenaina dia mahazo anao mofo 1 isan-kerinandro sy kitapo iray. Inona no hitranga avy eo? Avy eo dia noana ny olona avy eo miala ao an-tranony. Hampandre azy ireo ny mpifanila trano aminy, satria ireo mandeha baomba mandoa ny fotoana korona dia mampidi-doza ho an'ny tenany sy izay rehetra fantany. Ary avy eo ny tafika dia tokony hiditra an-tsehatra ary ho hitantsika fa maro ny olona nanjavona. Tsy zavatra mampatahotra izany, fa tsy misaina akory izany.
Avy eo isika dia nahita ny korontana tany Eropa izay tsy noeritreretiko foana. Ary rehefa manjaka ny korontana, matetika misy hery vaovao manafika mba handaminana ireo zavatra. Fantatrao hoe iza no firenena misy ahy efa nandritra ny taona maro. Izy rehetra dia script rehetra ary izaho mamaritra ny script master ao amin'ny bokiko. Raha efa namaky an'io boky io sy ny fanampin'io boky io eto amin'ny tranokala ianao dia fantatrao fa misy fanantenana. Fa lasa lalina kokoa izany. Ny zava-misy dia mitombina sy mahomby. Avy eo ianao dia vonona ary fantatrao amin'ny ambaratonga ahafahanao manao zavatra iray.
Lisitry ny rohy loharano: nos.nl, trouw.nl, trtworld.com
Tags: lavitra, iray sy tapany, ny vola miditra, Coronavirus, Featured, ny vidim-piainana, lockdown, mametraka, Rutte, fanohanana
23 Martsa 2020 ao amin'ny 10: 10
Ho fanampin'ny haino aman-jery sosialy, izay anananan'ny rehetra (voalaza) fa tsy misy mandray ny andraikiny ary tsy manaraka ny baiko "fifandirana ara-tsosialy" arahin'ireo (antsoina hoe manampahaizana), dia feno fampitandremana indray ny gazety ankehitriny.
Ny manam-pahaizana telegrama amin'ny fikoropahana, loham-pianakaviana amin'izao fotoana izao dia misarika: HANOKO NY DIDY ”. Mampitandrina sy manamafy ny tahotra ny ben'ny tanàna sy ny mpamporisika fa ny Holandy dia tsy miraharaha ny baikon'ny Rahalahy Big, sns.
Vonona ny olona hiatrika fanakatonana tsy misy tomika ary diso daholo izahay.
Iza no hafahafa (heveriko fa hafahafa) fa izaho sy ny naman'ny sakaizako (manana namana boribory marobe aho) dia tsy mahalala olona manana na nanana corona, ny zava-drehetra dia avy amin'ny gazety, Nieuwsuur, Youtube.
Hafahafa ihany koa satria maro ny olona malaza maneran-tany no manana corona, (mazava ho azy fa tsy mpamaky ny herim-poko izy ireo) toa ny fijerin'ny viriosy ny olona malaza (mpanao politika, mpanakanto, mpihira, kintana amin'ny sarimihetsika ary tsy hilazana ny olo-malaza atleta).
Mino aho fa fahita matetika amin'ny virus corona heveriko fa fanavakavahana izany, fa nahoana no olo-malaza ihany?
23 Martsa 2020 ao amin'ny 10: 40
Ianao taloha dia nanana mpikambana NSB .. manana mpikambana IMB ve isika izao?
23 Martsa 2020 ao amin'ny 11: 24
Raha jerena akaiky dia tena mpikambana amin'ny NSB tokoa izy ireo. Mety manazava ny antony mahatonga ny olona maro toy izany any Holandy ary maninona no manamora ny governemanta eto ny hanentana sy handrisika ireo olona ireo, ary tsy mba amin'ny vola akory izany.
Tamin'ny Ady Lehibe Faharoa, indraindray dia nitaraina ny Alemanina fa diso loatra ny Holandey tamin'ny fanampiana sy ny famadihana ny mpiray tanindrazana aminy. Ny sasany nitaraina fa noho izy ireo dia be loatra ny asa nataony ary sahirana loatra ny fitadiavany ireo mpamadika.
Ny holandey (tsy mazava ho azy) dia manana saro-pady tena saro-piaro kokoa noho ny Alemanina, Belzika ary na frantsay aza, saika tsy manome olona holandey hafa mihiratra izy ireo, ka inona no tsara kokoa noho ny famadihana ny mpiray tanindrazana aminao ary noho izany ihany koa ny valisoa tsara ho azo, manantena aho fa mety misy lisitry fiandrasana ny olona maniry ho IMB.
23 Martsa 2020 ao amin'ny 10: 18
Teny an-dàlana teny lavidavitra dia nahita mpivady nifanandrify tanana sy nifanoroka (tsy misy tsy mety) ohatran'ny voromailala, zazalahy sy zazavavy iray.
Nisy vehivavy iray nandalo ny mpivady ary henoko hoy izy, hanajanona an'io ve ianao ary gaga ilay ankizilahy mivady ary nanontany izay zava-niseho. Hoy izy, nikiakiaka, "fantatrao fa tsy tokony ho adala ianao." Ilay zazalahy: "Ma milamina, tsy misy tsy mety". lasa saro-kenatra ilay vehivavy ary nanomboka nanozona, afaka naka aina io, nitohy tamim-pahanginana ilay mpivady, nijanona ilay vehivavy.
23 Martsa 2020 ao amin'ny 11: 16
Ny vokatry ny mister smith amin'ny hetsika, na iza no mahalala, fa ny vehivavy mamy dia mpikamban'ny NSB maoderina (fantatra ihany koa eo ambanin'ny lohateny miasa inofficieller mitarbeiter).
23 Martsa 2020 ao amin'ny 11: 07
Nikatona ny banky tao an-tanànako androany (fitsapana andrana? Hahitana ny fihetsiky ny olona)?
Manantena aho fa ny fepetra amin'ny herinandro / volana ho avy izay mety mitaky be dia be amin'ny diaben'ny Hegelian alohan'ny hamoahan'ny vahoaka handray azy ireo.
fepetra vitsivitsy hitako (tsy fantatro raha mitranga izany fa heveriko fa afaka) sy ny vokany:
1) fetran'ny pin isaky ny karatra isan'andro / herinandro, ohatra, 50 euro. (mamorona korontana atahorana ary lasa zatra tsy am-bola ny olona)
2) na ATM izay misokatra vetivety foana isan'andro / herinandro (mamorona korontana ary zatra amin'ny tsy manam-bola)
3) fampidirana (vetivety foana, fa izao dia gazety ho an'ny maharitra) fampidirana ny vola miditra
4) ny fampidirana ny fidiram-bola fototra ho an'ny fitomboan'ny hetra vonjimaika dia hitarika, ohatra, 90% ho an'ny SME / freelancer izay mbola mahomby ary mahazo vola tsara na, araka ny filazan'ny elite, dia mahazo tombony amin'ny krizy.
5) manala baraka amin'ireo mpandraharaha izay noheverina fa nanararaotra ny krizy ary nahazo vola satria manan-tsaina izy ireo ka tonga amin'ny modely azo raisina amin'ity corona hype ity. (Hitako fa be dia be izany amin'ny media sosialy sy ny tranokalan'ny elatra havia)
6) Fanitarana ny volan'ny fisotroan-dronono sy indostria. (SME ireo dia iharan'ny fameperana sy fitomboan'ny hetra (antsoina hoe hetra firaisankina ho an'ny firaisankina vonjimaika) fa banky avokoa izy rehetra, ao anatin'ireo orinasa ireo izay mbola mahazo vola tsara na eo aza ny krizy.
7) ny multinationals dia mihalehibe ary mihamatanjaka, mihena tanteraka ny tsenan'ny tahiry. Ny orinasam-bola amin'ny fifanakalozana dia novaom-pirenen'ny governemanta (novonoina vetivety) ary novidin'ny elite (tsy mbola teo am-pelatanany).
8) Ny fampidirana haingana ny 5g eran'izao tontolo izao dia azo antoka ho fiarovana sy hisorohana ny fihanaky ny viriosy manaraka.
23 Martsa 2020 ao amin'ny 12: 15
Raha toa ka voarindra ny volan'ny fisotroan-dronono, dia voatsindrina ny fananganana fanjakana. Fomba iray hampihenana ny trosam-bolam-panjakana izany. Efa hitantsika izany amin'ny firenena iray toa an'i Hongria, izay nandao ny volan'ny fisotroan-dronono ho an'ny firenena sy ny trosan'ny governemanta (ho an'ny GDP). Horaisin'ny governemanta amin'ny ampahany lehibe amin'ny trosany ny governemanta, izay mety tsara kokoa ho an'ny banky noho ny mamela azy hanjavona amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ity farany satria tsy tian’ny banky ireo olona manana trosa mindram-bola ahafahana manala ny trosany tahaka izao. Ho lany ny fananana noho ny tsy fandoavana ny trosa isam-bolana ho an'ny banky.
23 Martsa 2020 ao amin'ny 13: 33
Raha tsy afaka mandoa ny trosany vola intsony ny olona dia haka ny banky.
Raha manankarena ny banky (jereo ny ABN AMRO), dia ny fanjakana avy hatrany no hanana ireo trano rehetra ... ny kaominisma teknolojia amin'ny fanaovana
23 Martsa 2020 ao amin'ny 13: 07
TANY vavolombelona mitory:
Tamin'ny zoma lasa teo dia niresaka tamin'ny Afrikana mandositra aho izay manankarena ny toe-karena holandey amin'ny maha-mpandraharaha. Niresaka momba namana tsara any Sina izy. Io namana io dia nampifindraina niaraka tamin'ny fianakaviana (vady sy zaza 2,5) nandritra ny 3 volana. Nahazo vouche iray avy amin'ny fanjakana ry zareo. 1 olona manana tokantrano no avela hanao fivarotana isan'andro. Ny fanaovana tatitra dia tsy maintsy atao amin'ny karazana fanamarinana mialoha. Legitimation amin'ny telefaona sy voucher. Mihodina ny tsenam-bokatra amin'ny fanokafana, fa mazàna misokatra ihany ny 1. Nanontany aho ny amin'ny asany (amin'ny orinasa manjaitra). Soa ihany fa "voavaha" ihany koa. Tsy tokony andoavany ny trano sy ny herinaratra, ny fanjakana no naloan'ny fanjakana hividy sakafo.
Taty aoriana dia rehefa tao an-trano aho, ary niverina tamin'ny fampahalalana, maro ireo fanontaniana tiako hapetraka. Na izany aza, ny fahafahana hahafahako mifandray manokana aminy indray amin'ny herinandro ho avy dia mihena isan'andro.
1 = tsia
iray = tsia
Raha manontany ny fanontaniana mety ianao, indrindra fa ireo fanontaniana izay mitaky famaritana azo ampiharina momba ny làlan'ny zava-mitranga isan'andro / ny fahatsapan-tena, ny sary lehibe dia hipoitra mandeha ho azy. Ary mora ny mamarana amin'ny alàlan'ny fahaiza-manavaka raha misy fahatsorana na fanadinoana tena izy
Attn zzpers izay misoratra anarana ho fanampiana ara-bola izao. Mbola manan-kery ny lalàna fandraisana anjara. Mahazo tambin-karama = manaova fandraisana anjara. Raha tsy misy asan'ny safidinao, dia misy asa. Izany koa dia modely vola ... hatramin'ny taloha, ny rafitra feudal na divay vaovao ao anaty kitapo taloha?
Makà fanampiana ara-dalàna? izany koa dia zavatra taloha. Nakatona ny fitsarana ambanivohitra (sivily) mandra-pahamarin'izany bebe kokoa.
iray ihany isika rehetra, taiso ny kodiarako, tsy notch wink wink wink hoe tsy hiteny intsony
Na eo aza izany ny tampon'ny lohataona. Satria norarahana koa ny orona. Ny natiora dia mbola 6 herinandro eo alohanay, ny alimanaka dia 6 herinandro aorian'io. Jereo ny asanyjing / jaap voigt ary miaina araka ny vanim-potoana
Araho ny natiora ary ianao no tena voajanahary! On-ward (ao amin'ny paroasy) sy ny basy (ao amin'ny paroasy) na eo aza….
Fametahana aretin-tsaina!… .Raha mbola te hanome “fanampiana” ianao…
marijke nanoratra hoe:
24 Martsa 2020 ao amin'ny 05: 36
Martin:….. «Avy aiza io vola io ?? `
Raha tsy hoe maro ny fisotroan-dronono izao dia maty, ary ny vola fisotroan-dronono ho an'ny fanjakana dia tena fongotra
ary noho izany dia mihamalalaka ny vilany fisotroan-dronono (izay ahafahan'izy ireo mandoa vola be….)… .is
misy zavatra hafa koa: Azo antoka fa namaky ny tamin'ny 10 (!) lasa aho fa ireo fianakaviana mpanankarena matanjaka (antsoina hoe illuminati, Rothschilds, Rockefellers sns ...) dia nitahiry ny 2 0 0 TRANONANA natokana hatramin'ny 2 0 0 7 efa nijanona! Satria manana fananana iraisan'izy ireo mihoatra ny 8 5 0 TRILLION (avy eo tombanana, angamba ankehitriny) mety ho azonao eritreretina fa tsy ahatratra an'ireo 200 trily ireo izy ireo. Izany 200 trillon ho banky kisoa io dia ny haka an'izao tontolo izao, izay misy ankehitriny. Ao amin'io lahatsoratra io ihany, izay indrisy fa tsy manana fifandraisana intsony, dia voalaza ihany koa fa ny totalin'ny fananan'ny olona ivelan'ny fianakaviana ireo dia noho izany, ny tany dia tombanana ho 40 tapitrisa ihany. Ny hazavana koa dia manana in-2 be ny vola, satria ny olona iray manontolo amin'ny tany dia olona 0 miliara.
2 0 0 trillion, raha manana 850 trily ianao dia fahorianao. 2 0 0 trillion dia 200 misy 18 zeros, ka raha ny marina dia: 2 0 0 miliara x iray miliara. Tao anatin'io lahatsoratra io ihany koa dia voalaza fa tao anatin'io vilany io, amin'izao vanim-potoanan'ny fandroahana izao, ny iray dia handoa fanjakana tsy manam-petra iray avy amin'ny fanjakana rehetra any amin'ny firenena rehetra, IZAO IZAO NO AZONAO NO AZONAO? Napetraka tao amin'io lahatsoratra io ny fanamafisana
`amin'ny fahazoana vola ', ary TSY ny vidiny izany. Ny tanjona faratampony dia ny hamafisiny
ary tsy zava-dehibe ny vola.
Mbola azo jerena ny lahatsoratra, fa ny fialan-tsasatra raha tsy manana rohy, hatry ny ela. Azo antoka fa hisy mpaneho hevitra mahatsiaro an'ity lahatsoratra ity?
« Rehefa tonga ny fanidiana koronavirus total sy ny endriny: poste fitsapana ary tafika
Ny karatry ny taratasim-bolan'ny Bill Gates dia ny karapanondro ID tsy misy tariby izay manara-maso raha manana coronavirus ianao ary na nahavita vaksiny. »
Total visits: 1.455.754